८ ओभरमा छोट्याइएको खेलमा धनगढीको सनसनीपूर्ण जीत, हेर्नुहोस् १५ फोटोहरु, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
८ ओभरमा छोट्याइएको खेलमा धनगढीको सनसनीपूर्ण जीत, हेर्नुहोस् १५ फोटोहरु
डिसी नेपाल , २४ चैत्र २०७४
काठमाडौं। राउण्ड रोबिन चरणको आ–आफ्नो अन्तिम खेल खेलिरहेका धनगढी टिम चौराहा र रुपन्देही च्यालेञ्जर्सबीचको अन्तिम प्रतिस्पर्धामा धनगढीले ३ रनको हात पारेको छ । आज पराजित भएसँगै रुपन्देही सबै खेल हार्दै खेलबाटै बाहिरिएको छ ।
वर्षाले प्रभावित भएपछि ८ ओभरका छोट्याइएको खेलमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको धनगढीले ७ विकेटको क्षतिमा ७३ रन बनाएको थियो । धनगढीका लागि सोनु तामाङले सर्वा्धिक ३४ रन बनाए ।
उनी म्यान अफ द म्याच समेत घोषित भए । रोहन मुस्तफाले १५ रन बनाए । रुपन्देहीका सुसन भारीले ३ र दिपेश श्रेष्ठले २ तथा सागर पुन र शक्ति गौचनले १–१ विकेट लिए ।
जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको रुपन्देहीले निर्धा्रित ८ ओभरमा ५ विकेटको क्षतिमा ७३ रन मात्र बनाउन सक्यो । सागर पुनले सर्वा्धिक ३३ रन बनाए । दिपक प्रसादले १६ रन बनाए । धनगढीका रोहन मुस्तफाले २ विकेट लिए । ललित भण्डारीले १ विकेट लिए ।